တီအန်းမင်အရေးအခင်းမှ ကောက်နုတ်ချက်များ ၁၉၈၉ ခုနစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » တီအန်းမင်အရေးအခင်းမှ ကောက်နုတ်ချက်များ ၁၉၈၉ ခုနစ်
တီအန်းမင်အရေးအခင်းမှ ကောက်နုတ်ချက်များ ၁၉၈၉ ခုနစ်
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Dec 11, 2017 in Facebook, History | 1 comment
မဟုတ်တရုတ်ကူမြူနစ်သူလ ျှို ကြေးမုံဂျီး ကူမြူနစ်ပါတီရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းခဲ့ပုံ ပြန်ပြောင်းသိစေဖို့ ဖဘမိတ်ဆွေ Tun Aung shared 天下第一‘s post.
天下第一 added 20 new photos.
၁၉၈၉ ခုနစ် #တီအန်းမင်_အရေးအခင်း
“ကျောင်းသားတွေ ကိုယ့်အိမ်ကို ပြန်ကြပါ။ နောင် နှစ်ပေါင်း ၂ဝ အတွင်းမှာ တိုးတက်လာမယ့် တရုတ်ပြည်ကြီးရဲ့ ပြောင်းလဲလာမှုတွေကို ပြတင်းပေါက်ကနေ စောင့်ကြည့်ပေးကြပါ။”
တီအန်းမင်အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၂၈ ပြည့်သွားပါပြီ။ မြန်မာမှာ ၁၉၈၈ ခုနစ် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်ပြီး နောက်တနှစ် ၁၉၈၉ ခုနစ်မှာတော့ တရုတ်ပြည်မမှာ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ရက်ပေါင်း ၅ဝ ကြာ နိုင်ငံတဝန်းမှာ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ တိန့်ရှောင်ဖိန်ရဲ့ ပြောင်းလဲရေး စတင်ချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဆန္ဒပြမှုတွေဟာ ၁၉၈၉ ခုနစ် ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဝါဒယိမ်း ပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟူယောင်ပန်း သေဆုံးခြင်းနဲ့ အတူတူ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ သွေးမြေကျမှုနဲ့သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ရပေမယ့် တိန့်ရှောင်ဖိန်ရဲ့ ကတိစကားအတိုင်းပဲ တရုတ်ပြည်ဟာ ပြန်လည်ဦးမော့လာခဲ့ပြီး ဒီအဖြစ်အပျက်တွေလဲ မှေးမှိန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံအတွက်တော့ လေ့လာစရာ သင်ခန်းစာယူစရာလေးတွေ ရှိနေတာကြောင့် တီအန်းမင်အရေးအခင်းထဲက အမှတ်ရဖွယ် ဖြစ်ရပ်များကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
၁။ ရှင်းဟွာဂိတ်မှ အဓိကရုဏ်း
တီအန်းမင်အရေးအခင်းရဲ့ ပထမဆုံး သွေးမြေကျမှုဟာ ရှင်းဟွာဂိတ်ကနေ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ပေကျင်းတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေ ဦးဆောင်တဲ့ ဆန္ဒပြအဖွဲ့တွေဟာ ရှင်းဟွာဂိတ်ရှေ့မှာ စင်မြင့်ထိုးပြီး ထိုစဉ်က ဝန်ကြီးချူပ် လီဖန်းကို ထွက်လာခဲ့ပြီး သူတို့နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို ပြည်သူ ၁ သောင်းနီးပါးခန့် ဝန်းရံပေးကြပါတယ်။ ပြီးနောက် “ဒီမိုကရေစီ အောင်ရမည်။” စသည့် ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ဂိတ်ရှေ့မှာ ဟစ်အော်နေကြပါတယ်။ ထိုအချိန် ရဲအင်အား ၁၀၀ဝ ခန့်က အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေး လက်နက်များဖြင့် အမာခံကျောင်းသား ၃၀ဝ ခန့်ကို ဝိုင်းထားလိုက်ပါတော့တယ်။ ထိုအခါ ကျောင်းသားများက ရဲတွေတားဆီးထားတဲ့ အရံအတားတွေကို ဖောက်ထွက်လာတဲ့အခါ ရဲများက ဒိုင်းများကိုင်ဆောင်ပြီး ကျောင်းသားအုပ်ကို ပိတ်ဆိုထားပါတယ်။ ထိုအခါ ကျောင်းသားများက ခဲများ ရေသန့်ဘူးခွံ့များဖြင့် ရဲများကို ပစ်ခတ်ကြတဲ့အတွက် အကြမ်းဖက်မှု အသွင်အဖြစ် ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ အစကတော့ ရဲအရာရှိလဲ အထက်က အမိန့်အတိုင်း ကျောင်းသားတွေကို မနာကျင်စေလိုတဲ့အတွက် တားဆီးရုံမျှသာ တားဆီးပြီး အိမ်ပြန်ဖို့ တိန့်ရှောင်ဖိန် ပြောစကားအတိုင်း အထပ်ထပ် ပြောကြားနေပါတယ်။ ထိုကာလက တရုတ်ပြည်ဟာ ပြောင်းလဲရေးစတင်ချိန်ဖြစ်လို့ ပါတီအတွင်းမှာလဲ သဘောထား ပျော့ပြောင်းသူနဲ့ မော်စီတုန်းလက်ထက် သဘောထားတင်းမာသူ ဆိုပြီး ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အခြေအနေက ဆိုးလာတဲ့အခါ ရဲဝန်ထမ်းတချိူ့လဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရကုန်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲအရာရှိကတော့ “ကျောင်းသားတွေ အိမ်ပြန်ကြပါ။ ပါတီလူကြီးတွေ ပြောထားတဲ့ အတိုင်း ပြောင်းလဲမှုတွေကို စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး စောင့်ကြည့်ပေးကြပါ” လို့ အော်ပြောရင်း ဘတ်စ်ကားတွေကို ခေါ်ယူပြီး ကျောင်းသားတွေ နေရပ်ပြန်ဖို့ လိုက်ပို့ပေးစေပါတယ်။ တချိူ့ကျောင်းသားတွေလဲ ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကနေ ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကတော့ ခေါင်းမာစွာနဲ့ ဆက်လက် ဆန္ဒပြနေဆဲပါ။ ထိုစဉ် အထက်အရာရှိက တာဝန်ကျ အရာရှိကို ဖြိုခွင်းဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အမိန့်ရတာနဲ့ တပြိုင်နက် နံပါတ်တုတ်များကို ဆွဲထုတ်ကာ ကျောင်းသားများကို လိုက်လံရိုက်နှက်ရင်း အဓိကရုဏ်းကို ဖြိုခွင်းပါတော့တယ်။ ကျောင်းသား အများစုဟာ သေတဲ့အထိ ရိုက်နှက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ တချိူ့ကိုလဲ ခေါင်းကို မြေကြီးနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ဆောင့်ပြီး ခေါင်းကနေ အချူပ်ကားရှိရာကို တရွတ်တိုက် ဆွဲခေါ်သွားပါတော့တယ်။ ကားတစ်စီးလုံးမှာ သွေးကွက်တွေအပြည့်နဲ့ သွေးစွန်းနေတဲ့ အကျႌတွေ ချင်းချင်းနီလျက် ရှိပါတော့တယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေရာမှ မလိုလားအပ်တဲ့ သွေးကြွမှုတွေကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုအသွင် ပြောင်းလဲသွားတာမို့ ပြီးဆုံးသည်အထိ သွေးမြေကျမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ရှင်းဟွာဂိတ် ဖြစ်ရပ်ဟာ တီအန်းမင်အရေးအခင်းရဲ့ အစပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
၂။ စစ်သားနဲ့ ပြည်သူကြားက သံယောဇဉ်
ရှင်းဟွာဂိတ် အရေးအခင်းဖြစ်ပြီးနောက် ဆန္ဒပြသူများစွာရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ထပ်တူညီတဲ့ ခံစားချက်မျိူးဟာလဲ တရုတ်ပြည်သူ့တပ်မတော်ရဲ့ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်ရေးကို စစ်သည်တွေအထိ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။
မေလ ၁၉ ရက်နေ့မှာတော့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ စစ်တပ်ကို စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေဟာလဲ တီအန်းမင်ရင်ပြင်မှာ စုရုံးဖို့ လမ်းတွေမှာ တိုးမပေါက်နိုင်အောင် ပြည့်နှက်နေပြီး ချီတက်နေကြပါတယ်။ ပြည်သူထောင်သောင်းများစွာနဲ့ ကျောင်းသားတွေ စုရုံးပြီး သွားလာကြတဲ့အခါ အထက်အမိန့်ကို သိနေကြတဲ့ စစ်သားတွေဟာ ဆက်မသွားဖို့ တောင်းပန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေကို ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပေမယ့် အေးချမ်းစွာပဲ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူအုပ်ကြီးကတော့ တားဆီးမရပဲ အတင်းဖောက်ထွက်လာပါတယ်။ ထိုအခါ အရာရှိက သွားခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ တီအန်းမင် ရင်ပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာလဲ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ စစ်သားတွေကို သူတို့ဆီမှာပါလာတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ ကျွေးမွေးကြသလို စစ်သားတွေကလဲ ပြည်သူတွေကို အပြန်အလှန် စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရက်အနည်းငယ် အကြာမှာတော့ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းဖို့ ပစ်မိန့်ကျလာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလို စည်းလုံးညီညွှတ်နေတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ အကျည်းတန်သွားရပါတော့တယ်။
၃။ အင်အားသုံးဖြိုခွင်းရန်အမိန့်ကို မနာခံခဲ့လို့ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ဗိုလ်ချူပ်ကြီး ရွီချင်ရှန်း 徐勤先 နှင့် တခြားသော စစ်ဘက်အရာရှိများ
ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို စစ်တပ်ဖြင့် အင်အားသုံးဖြိုခွင်းရန် အမိန့်မပေးခင် အရင်ဦးစွာ ပါတီဗဟိုမှာ စစ်ဘက်အရာရှိတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ပါတီကို လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထောက်ခံဖို့ ကတိတောင်းခံပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆိုးရွားလာပါက အင်အားသုံး တိုက်ခိုက်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချူပ်ကြီး ရွှီချင်ရှန်း တစ်ယောက်ကတော့ လူထုကို စစ်တပ်ဖြင့် နှိမ်နင်းတာကို ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
“ပြည်သူ့တပ်မတော်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာ ဘယ်တော့အခါမှ လူထုကို ဖိနှပ်ခဲ့တာမျိူး မရှိဘူး။ တပ်မတော်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာ အမည်းစက် ကျန်ခဲ့မယ့် အလုပ်မျိူး မလုပ်ဘူး။” လို့ သူပြောခဲ့ကြောင်း ဒီဖြစ်ရပ်တွေ ပြီးဆုံးပြီး သူထောင်ကနေ လွှတ်လာချိန် ဟောင်ကောင်က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီစကား ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ဘဝဟာလဲ ဆုံးခန်းတိုင်သွားပြီဆိုတာ သိခဲ့ပါတယ်တဲ့။
တကယ်လဲ ပစ်မိန့်ထွက်လာချိန်မှာ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်က စစ်သည်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာလဲ ရွှီချင်ရှန်းခံစားရတာနဲ့ ထပ်တူ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ရွှီချင်ရှန်းအပြင် တခြားသော စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင် ရ ဦးဟာလဲ ပါတီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ အသနားခံစာတင်ကာ တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
အခြားသော တပ်မှူးတွေရဲ့ အသနားခံစာထဲမှာလဲ “ပြည်သူ့တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်း ရှိနေတာပါ။ ပြည်သူတွေနဲ့ ခွဲခြားလို့ မရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်ဖို့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။” လို့ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
ပေကျင်းမှာ ရောက်နေတဲ့ တပ်မှူး ရွှီဖုန်း ဆိုသူဟာ တပ်ရင်းတစ်ရင်းနဲ့ ပေကျင်းမြို့က တီအန်းမင်ရင်ပြင်အနီးနားမှာ ခိုအောင်းကာ တပ်စွဲနေရပါတယ်။ တပ်ချထားတဲ့ စခန်းကနေ အထက်က အမိန့်ကို အသင့်အနေအထားနဲ့ စောင့်နေရပါတယ်။ သူ့ဘဝမှာ မကြားချင်ဆုံး အမိန့်တစ်ခုက တီအန်းမင်ရင်ပြင်ကို စစ်ကြောင်းနဲ့ ချီတက်ပြီး ဖြိုခွဲခိုင်းတဲ့ အမိန့်ပါပဲလို့ နောင်တချိန်မှာ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဗို်လ်ချူပ်ကြီး ရွှီချင်ရှန်းလဲ အမိန့်အာဏာဖီဆန်မှုနဲ့ စစ်ခုံရုံးတင်ခံရပြီး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ကျခံစေကာ ပေကျင်းမှာ နေထိုင်ခွင့်ကို ရာသက်ပန် ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ မော်စီတုန်းလက်ထက် ကျခံခဲ့ရတဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေထက်စာရင် ပေါ့ပါးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ရွှီချင်းရှန်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြောင့် သူဟာ သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် အမှတ်ရနေကြပါပြီ။ သူကတော့ သူ့သမိုင်းမှာ အမည်းစက်မရှိတဲ့ အတွက် ကြောက်ရွံ့နေစရာ မလိုတော့ဖူးလို့ ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
၄။ ပစ်မိန့်မရသေးပဲ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ခြင်း
အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို ပါတီအတွင်းမှာလဲ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းပြီး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပါတီဝင်တွေမှာလဲ သဘောထား တင်းမာသူနဲ့ သဘောထား ပျော့ပြောင်းသူတွေ လွန်ဆွဲနေကြသလို စစ်ဘက်ထဲမှာ တချိူ့သော ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေ ကန့်ကွက်ခဲ့တာမို့ အမိန့်ကို မချမှတ်နိုင်သေးပါဘူး။ ထိုအချိန် တီအန်းမင်ရင်ပြင်မှာလဲ အဓိကရုဏ်းတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့် တချိူ့တလေကို ဖမ်းဆီးတာတွေ ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်ပြီး လူစုခွဲတာတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်နေပါပြီ။ အစပိုင်းက စစ်သားတွေအပါအဝင် စစ်ဘက်အရာရှိတွေ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာက ပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်မှာ မဟုတ်ပဲ ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်ပြီး အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းကာ အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အချက်ကို အလေးထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးဆူလွယ်တဲ့ ပြည်သူတချိူ့က အုတ်ခဲတွေ ပုလင်းခွံ့တွေ နောက်ဆုံး စစ်သားတွေထဲကို သံချောင်းတွေနဲ့ ဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့တာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အထိ ဆိုးရွားလာပါတယ်။ (ဆန္ဒပြသူတွေ ကြားထဲမှာလဲ နောက်ကွယ်က လက်မည်းကြီးတွေ ရှိမှာပေါ့နော်။ ပါတီထဲက သဘောထားတင်းမာသူတွေက မော်စီတုန်းဝါဒ ဆက်ခံသူတွေ ဆိုတော့ ထင်မြင်ချက်လေးပါ။)
ဒီတော့ စစ်သားတချိူ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ တခြားသော စစ်သားတွေဟာလဲ ဒေါသထွက်ပြီး မြင်မြင်သမျှ လူအုပ်ထဲကို သေနတ်နဲ့ လိုက်လံပစ်ခတ်ပါတော့တယ်။ ထိုအခါ အနီးအနားရှိ တပ်ရင်းတရင်းကလဲ တီအန်းမင်ရင်ပြင်သို့ အရောက်ချီတက်ကြမယ် ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ဟစ်ကြွေးပြီး လူအုပ်ကို ဆဲဆိုတာ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ကြပါတော့တယ်။ ဝမ်ယုန်လိ လို့ခေါ်တဲ့ စစ်သည်တစ်ဦးက အဲ့တုန်းက အခြေအနေကို “အစက ဘယ်သူကမှ ပစ်ခတ်ဖို့ အမိန့်မချသေးဖူး။ ဒါပေမယ့် အခုလိုတွေ ဖြစ်လာတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် သင်ခန်းစာပေးဖို့ ချီတက်ခဲ့ကြတယ်။ ဟိုရောက်တော့ စစ်သားတွေလဲ သူတို့ရဲ့ ဒေါသတွေကို လူအုပ်ကြီးအပေါ် ပုံချလိုက်တော့တာပဲ” လို့ ပြောသွားပါတယ်။ တီအန်းမင်ရင်ပြင်မှာ သွေးမြေကျခြင်းရဲ့ အစပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
၅။ တင့်ကားနဲ့ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ကျောင်းသားအုပ်ထဲ မောင်းဝင်သွားခဲ့တယ်
ဒီဖြစ်ရပ်တွေမှာ တချိူ့ဟာတွေကလဲ ကောလဟာလတွေလို ဘာလိုလို ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ လူသက်သေတွေကတော့ ရှိနေဆဲပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်ရပ်တွေ ပြောပါဆို ဆန္ဒပြသူတွေကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ပြီး တင့်ကားနဲ့ တက်ကြိတ် လူအုပ်ထဲ မောင်းဝင်သွားတာရယ် စုံစမ်းဖော်ထုတ်မိတဲ့ သေဆုံးသူ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ မိသားစုတွေထံမှ ကျည်ဆံဖိုးနဲ့ ဓာတ်ဆီဖိုးတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် သေဆုံးမှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ အစိုးရဘက်က တုံ့ပြန်မှုက ပြင်းထန်လှပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ဆိုးရွားတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ စတင်လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ပစ်မိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Gas Bombs တွေ ပစ်ခတ်ပြီး လူအုပ်ထဲကို ဝင်ရောက်ပစ်နေချိန် ဝပ်နေတဲ့ လူတွေကြားထဲ တင့်ကားတွေနဲ့ ဖြတ်မောင်းဝင်လာပါတယ်။ ပြေးလွှားနေတဲ့ လူအုပ်တွေလဲ သေနတ်မှန်လို့ သေဆုံးကုန်တဲ့ လူတွေနဲ့ တင့်ကားကြိတ်ခံရလို့ သေဆုံးကုန်တဲ့လူတွေဟာ လမ်းမကြီးတလျှောက် ပြန့်ကျဲနေပါတော့တယ်။ ထွက်ပြေးနေတဲ့ လူအုပ်ထဲကို တင့်ကားအမြောက်နဲ့ ပစ်ခတ်လိုက်တာကို ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့ ကျောင်းသား ၂ ဦးဟာ စက်ဘီးနဲ့ နောက်သို့ ပြန်လှည့်ပြေးစဉ် တင့်ကားပေါ်က စစ်သားတစ်ဦးဟာ သူတို့ တွေ့မြင်သွားခဲ့ပြီး စက်သေနတ်နဲ့ ဒလစပ်ပစ်ခတ်တာကြောင့် သူ့သူငယ်ချင်းကတော့ နေရာမှာတင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ သူကတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ခြေထောက်ကို ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ထပြီး ဆက်ပြေးပါက ပစ်ခတ်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ဖမ်းဆီးခံရခြင်းနဲ့ ကြုံရနိုင်တာကြောင့် စစ်သားတွေ ထွက်သွားသည်အထိ ဒဏ်ရာရဲ့ နာကြည်မှုကို အံကြိတ်ခံခြင်း နေရာမှာတင် တခြားသော အပျက်အစီးတွေကြားထဲမှာ ငြိမ်သက်နေပါတယ်။ အာလုံးထွက်သွားပြီ ဆိုတော့မှ ပုန်းနေရာကနေ အိမ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒဏ်ကြောင့် သူ့ဘဝတလျှောက်လုံး မသန်စွမ်းတစ်ယောက် ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်တဲ့။
အမည်မဖော်လိုတဲ့ ကျောင်းသားရဲ့ ကံကြမ္မာလိုပဲ ဖန်ကျန်းကလဲ သူ့ဖြစ်ရပ်ကို ပြောပြပါတယ်။ ပထမဆုံး ဆန္ဒပြနေတဲ့ လူအုပ်ထဲကို သေနတ်ဖြင့် မွှေပစ်လိုက်ပြီးမှ တင့်ကားတစ်စီးက လူအုပ်ထဲကို တိုးဝင်လာပါတယ်။ လူအုပ်ထဲက ကျောင်းသား ၁ဝ ဦးခန့်ကို တင့်ကားနဲ့ တက်ကြိတ်သွားတာကို မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို အခုထိ အမှတ်ရနေဆဲပါတဲ့။ တုန်လှုပ်ဖွယ်မြင်ကွင်းဟာ သူမျက်စိရှေ့မှာ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် တစ်နေရာ အရောက်မှာတော့ ပြေးရင်းလဲကျသွားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တင့်ကားက တက်ကြိတ်တော့မယ့်ဆဲဆဲမှာ သူဟာ မိန်းကလေးကို ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ခြေထောက်ကိုတော့ တင့်ကားက တက်ကြိတ်သွားတာကြောင့် ဆေးရုံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားတာ ခံရပါတယ်။ ဆေရုံရောက်တော့ သူ့ခြေ ၂ ချောင်းလုံး ဖြတ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အရေးယူမှု မခံခဲ့ရပါဖူး။ အကြောင်းက သူဟာ ထိုအချိန်က အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်မှာ သံပြားဝိုင်းပစ် လက်ရွေးစင် အားကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်နေခဲ့လို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝဟာ အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရသလို အစိုးရကလဲ ဒီဖြစ်ရပ်ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောရဖူးလို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်သူမေးမေး သူ့ခြေထောက်ဖြတ်ခဲ့ရတာဟာ ကားအက်စီးဒန့်ကြောင့် ဖြတ်ပစ်ခဲ့ရပါလို့ ပြည်မမှာ နေစဉ်တလျှောက်လုံး ဖြေကြားခဲ့ရပါတယ်။
၆။ ဒုတိယ တီအန်းမင်ရင်ပြင် သို့မဟုတ် ချန်တူးမြို့က ထျန်းဖုရင်ပြင်
တီအန်းမင်ရင်ပြင်က အကြမ်းဖက်မှုတွေကို အစိုးရအနေနဲ့ သတင်းဖုံးဖိထားခဲ့ပေမယ့် ဆန္ဒပြသူတွေဟာ လူစုခွဲပြီး တခြားသော မြို့တွေမှာပါ လိုက်လံလှုံဆော်ခဲ့တာမို့ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ပျံနှံ့သွားပါတော့တယ်။ အဲ့ထဲမှာ ချန်တူးမြို့ဟာ ပေကျင်းမြို့ပြီးရင် အဆိုးရွားဆုံး အဖြစ်အပျက်များနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မြို့တမြို့ပါပဲ။ ချန်တူးမြို့က ထျန်းဖုရင်ပြင်ကို ဒုတိယ တီအန်းမင်ရင်ပြင်လို့ တင်စားခဲ့ကြပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေကျင်းမြို့က အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ဒေါသထွက်လာကြပြီး ချန်တူးမြို့သူမြို့သားတွေ အားလုံးဟာ လမ်းမပေါ်ကို ထွက်လာကြပါတော့တယ်။ June ၄ အကြမ်းဖက်မှု လို့ ရေးသားထားတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်တွေ ငါတို့သေမှာမကြောက်ဖူးကွ ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ အတူ ထျန်းဖုရင်ပြင်ကို ချီတက်လာကြပါတယ်။ ရဲတွေရောက်လာတဲ့အခါ ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ကြပါတယ်။ ထိုအခါ ရဲတပ်ဖွဲ့က မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်ပြီး နံပါတ်တုတ်များဖြင့် လိုက်လံရိုက်နှက်ပါတယ်။ လမ်းမထက်မှာ ရဲနဲ့ ပြည်သူတွေဟာ အပြန်အလှန် ရိုက်နှက်ကြတာမို့ တိုက်ပွဲတစ်ခုလို ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်းများစွာနဲ့ လူအုပ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ချန်တူးဖြစ်ရပ်ဟာ ပေကျင်းရဲ့ နာမည်ကြီး တီအန်းမင်အရေးအခင်းကြားထဲက အဖြစ်အပျက်မို့ သေချာမသိခဲ့ရပါဘူး။ အဆိုပါ ချန်တူးဖြစ်ရပ်မှာ သတင်းသမားတွေကိုပါ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ဓာတ်ပုံတွေကိုပါ အစဖျောက်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ချန်တူးမြို့ခံ ၁၈၀ဝ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ၈ ဦး သေဆုံးကာ ပြည်သူထောင်နဲ့ချီပြီး သတင်းအစအနပင်မရပဲ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာလဲ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိူးသားချင်းတွေရဲ့ သတင်းကို အမြဲတမ်း စုံစမ်းခဲ့ပေမယ့် သူတို့ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဘာသတင်းမှ မရခဲ့ပါဘူး။
၇။ သတင်းအမှောင်ချခြင်းနှင့် နာမည်ကျော် Tank Man ဓာတ်ပုံအကြောင်း
ပေကျင်းမြို့ဟာ ထိုအချိန်က ပြောင်းလဲရေးကာလ တံခါးဖွင့်ဝါဒ ကျင့်သုံးခါစဖြစ်လို့ ကမာ္ဘအနှံ့က သတင်းထောက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာ ဂျာနယ်လစ်တွေ ထိုအချိန် ရှိနေခြင်းကို အစိုးရက မကြိုက်ပါဘူး။ အစိုးရဟာ သူတို့ရဲ့ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းတဲ့ သတင်းတွေ ဓာတ်ပုံတွေ အပြင်ကို ပေါက်ကြားသွားမှာကို မလိုလာပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပြည့်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့က လျှိူ့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး ရဲတွေကို နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာမယ့် သတင်းထောက်တွေကို အသေအချာ စစ်ဆေးဖို့ တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတွေဟာ ဓာတ်ပုံတွေ ရေးထားတဲ့ သတင်းတွေကို ဖျောက်ဖျက် ပတ်စ်ပို့စ်သိမ်းပြီးမှ နိုင်ငံအတွင်းကနေ ထွက်ခွာစေပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ Tank Man ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ World Press Award ဆု ရခဲ့တဲ့ ချာလီကိုး လဲ သူ့ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြပါတယ်။
ပထမဆုံး သူတည်းခိုနေတဲ့ ဟော်တယ်ရဲ့ ခေါင်မိုးကနေ အရေးအခင်းဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ယူနေတာကို ထောက်လှမ်းရေးက တွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတွေဟာ သူရှိရာနေရာကို ရောက်ရှိလာပြီး တုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ကြပြီး သူ့ရဲ့ ကင်မရာနဲ့ ဖလင်တွေကို ယူဆောင်သွားပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ထွက်သွားပြီး အတော်ကြာမှ သူဝှက်ထားတဲ့ အပို ကင်မရာနဲ့ ဖလင်တွေနဲ့ Tank Man ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ယူခဲ့ပါတယ်။ နောက်တကြိမ် ရဲတွေ သူ့ကို လာရှာတွေအုံးမယ်ဆိုတာ ကြိုတွက်ထားတာမို့ ချာလီကိုးဟာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖလင်ကို တိတ်ဖြင့် အထပ်ထပ်ပတ်ပြီး အိမ်သာထဲက ရေစည်ထဲမှာ ထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ရဲတွေဟာ နောက်တကြိမ် သူ့ဆီကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့အခန်းတံခါးကို ချိူးဖျက်ဝင်ရောက်ပြီး တုတ်များဖြင့် ရိုက်နှက်ကာ သူ့ကင်မရာနဲ့ ဖလင်တွေကိုပါ ယူဆောင်သွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပတ်စ်ပို့စ်ကိုလဲ သိမ်းယူသွားခဲ့ပြီး တရားမဝင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုဖြင့် ခံဝန်ကတိရေးထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ထွက်သွားတော့မှ ချာလီကိုးလဲ အမေရိကန်သံရုံးရှိရာကို ရဲတွေမမြင်အောင် ခိုးဝှက်ပြီး အပြေးအလွှား သွားခဲ့ပါတယ်။ သံရုံးမှာ ဖလင်တိတ်တွေ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ တင့်ကားရှေ့မှာ ပိတ်ရပ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေဟာ ကမာ္ဘတဝှမ်းကို ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ Tank Man ကတော့ ရဲတွေဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
Tank Man ရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ပြန်ပြောရရင် ဗီဒီယိုထဲမှာ တင့်ကား ၂၅ စီးပါဝင်တဲ့ သံချပ်ကာစစ်ကြောင်း ချီတက်လာချိန်မှာ အထုတ်တွေ ဆွဲထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ဦးဆောင်နေတဲ့ တင့်ကားရှေ့ကနေ ပိတ်ရပ်လိုက်ပါတယ်။ ထိုလူဟာ ကျောင်းသားလား အရပ်သားလားဆိုတာ အခုချိန်ထိ မသိရပါဘူး။ တင့်ကားမောင်းတဲ့ စစ်သားကလဲ တခြားသော တီအန်းမင်က စစ်သားတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ပုံပါပဲ။ တင့်ကားနဲ့ တက်ကြိတ်တယ်လို့ အပေါ်မှာ ပြောထားခဲ့ပေမယ့် ဒီထဲမှာတော့ တင်ကားယာဉ်မောင်းဟာ ထိုလူကို ရှောင်ကွင်းသွားပေမယ့် အမည်မသိလူကတော့ တင့်ကားရှောင်တဲ့ဘက်ကို လိုက်လံ ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ သိပ်မကြာခင် စက်ဘီးနင်းလာတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့အနီးကို ရောက်လာပြီးနောက် အရပ်ဝတ်လူတွေပါ ရောက်လာပြီး ထို Tank Man အား ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ ပြီးနောက် တင့်ကားကို ဆက်သွားဖို့ အချက်ပြတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ချာလီကိုးကတော့ ဒီလူရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်မိကြောင်း သူဟာ သေချာပေါက်တော့ ထောင်ဒဏ်ကျခံရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ထောင်အတွင်း၌ အစိုးရတဲ့ သေဒဏ်ပေးခြင်းကို ခံရနိုင်ကြောင်း အင်တာဗျူးမှာ ဖြေကြားသွားပါတယ်။ နောင်တချိန်မှာတော့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ ကျန်ဇီမင်းကို အမေရိကန်သတင်းထောက်က Tank Man နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ မေးခွန်းကို မေးခဲ့ရာ ကျန်ဇီမင်းက “သူ့ကို သေဒဏ်ပေးတဲ့အထဲ မပါသွာဖူးလို့ ထင်ပါတယ်။” လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
Tank Man ဗီဒီယိုဖို်င်
၈။ တိန့်ရှောင်ဖိန်ရဲ့ မိန့်ခွန်း
ဂျွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာ တိန့်ရှောင်ဖိန်ဟာ အရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ရဲနဲ့ စစ်သားတွေ သေဆုံးရခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး “သူတို့ဟာ ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ပေးခဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေပါ” လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေကိုတော့ “လူထုရဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ” လို့ သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး တိန့်ရှောင်ဖိန်က “ငါတို့ရဲ့ အဓိက ရန်သူနဲ့ ရက်စက်ခဲမှုတွေကို မမေ့ပါနဲ့” လို့ ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံး တစ်ခုကတော့ တကယ်ပြောခဲ့တယ် မပြောခဲ့ဖူးဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ ကျွန်တော်လဲ ထိုင်ဝမ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောပြတာမို့ သိရတာပါ။
“လူပေါင်း ၂၀ဝ အသက်နဲ့ တရုတ်ပြည် နှစ် ၂ဝ တည်ငြိမ်ရေးကို လဲလှယ်ခဲ့တယ်။” ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။
မြန်မာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ၈၈ ဖြစ်ရပ်ဟာ တရုတ်ပြည်ထက် တစ်နှစ်စောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ တိန့်ရှောင်ဖိန်ဟာ သူပေးထားခဲ့တဲ့ ကတိအတိုင်း ဖော်ဆောင်ပြီး လျှောက်လှမ်းရမယ့် လမ်းကြောင်းတွေက်ို နောင်မျိူးဆက်သစ် ခေါင်းဆောင်တွေအတွက် ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ တိန့်ရှောင်ဖိန် ဖောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်အသစ်တွေဟာ တရုတ်ပြည်ကြီးက်ို နွံ့ထဲက ဆွဲတင်ရင်းနဲ့ ယခုအချိန်မှာတော့ တရုတ်ပြည်ဟာ စစ်ရေး စီးပွားရေး အဘက်ဘက်မှာ ကမာ္ဘ့ဒုတိယ အင်အားအကြီး နိုင်ငံကြီး တစ်နိုင်ငံအဖြစ်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ သွေးစွန်းခဲ့တဲ့ အတိတ်က ဖြစ်ရပ်တွေဟာလဲ ချမ်းသာခြင်းနဲ့ အတူ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်တည်လာဖို့ ထူထောင်နိုင်ဖို့ သွေးနဲ့ရင်းပြီး လုပ်ခဲ့ရတယ် ဆိုပေမယ့် သွေးနဲ့ ရင်းပြီးတာတောင် ဒုက္ခပင်လယ်ထဲ ဝဲလည်လည် ဖြစ်နေအုံးမယ့် လမ်းစဉ်ကို မရွေးပဲ ဒီမိုကရေစီရမှ တိုင်းပြည်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာထက် “ခေါင်းဆောင်တွေဟာ နတ်ဘုရားမဟုတ်” ဆိုတဲ့ စကားတခွန်းနဲ့ တစ်နိုင်ငံ ၂ မူစနစ်ဆိုတဲ့ လမ်းစဉ်အသစ်နဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ်တော့ စေတနာကောင်းတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ တိန့်ရှောင်ဖိန်ကို ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦးအနေနဲ့သာ သတိရနေကြပါပြီ။ တီအန်းမင်ရင်ပြင်မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာထက် တိန့်ရှောင်ဖိန် ဘာလုပ်ပေးခဲ့တယ် ဆိုတာကိုပဲ အမှတ်ရနေကြပါပြီ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်မှ မဟုတ်ဖူူး လမ်းစဉ်သာမှန်ရင် ဘယ်စနစ်မဆို ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေသာ အုပ်ချူပ်မယ်ဆို ဘယ်စနစ်မဆို လက်ခံလို့ရတယ်။ နိုင်ငံကောင်းစားမယ် ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းအသစ်ကနေ အသိတရားအသစ်တွေကို တိန့်ရှောင်ဖိန် ပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပုံချင်းစီ ထောက်ကြည့်ပေးပါနော်။
ကီလားဒေအကြောင်း များများ တူးဖော်ရမှာ။
ရီခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကီလားနွယ်ဝင် သူတော်ဇဉ်ဒေအကြောင်း